नुहाउने वित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुहाेस् यी ५ गल्ती,नत्र जरा कमजोर लगायत देखिन सक्छ यस्तो समस्या – Sandesh Press
नुहाउने वित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुहाेस् यी ५ गल्ती,नत्र जरा कमजोर लगायत देखिन सक्छ यस्तो समस्या
नुहाउने वित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुहाेस् यी ५ गल्ती,नत्र जरा कमजोर लगायत देखिन सक्छ यस्तो समस्या !**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
दिनभर हामीले केही यस्ता गल्ती गछौँ, जसकारण कपाल झ-र्ने समस्या सुरु भएको हुन्छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
केही गल्ती यस्ता जस जुन धेरै व्यक्तिहरुले कपाल नुहाएपछि गर्ने गर्छन् । हेयर एण्ड व्यूटी एक्सपर्टका अनुसार नुहाएपछि हाम्रो कपालको जरा कमजोर हुने गर्दछ ।
त्यो बेला हामीले केही गल्ती गर्यौ भने हाम्रो टु-क्रिने तथा कपाल झर्ने समस्या बढ्न थाल्दछ ।
नुहाएपछि गरिने केही गल्तीका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी निम्न छन्:-
१) कपाल कोर्नु:- नुहाउने वित्तिकै चिसो कपाल नकोर्नुहोस् । चिसो कपालको जरा कमजोर हुने हुँदा कोर्दा झ-र्ने र टु-क्रने समस्या बढ्न थाल्दछ ।२) कपाल बाँधनु:- नुहाउने वित्तिकै चिसो कपाल नबाँधनुहोस् ।
जसका कारण इन्फेक्सन वा चायाँको समस्या बढ्छ र कपाल झ-र्ने समस्या देखिन थाल्दछ ।३) मालिस गर्नु:- चिसो कपाललाई मालिस गर्दा कपालको जरा कमजोर हुने गर्दछ । जसका कारण कपाल झ-र्न थाल्दछ । त्यसैले नुहाउने वित्तिकै चिसो कपाल कहिलै पनि मालिस नगर्नुहोस् ।
४) तुरुन्त बाहिर निस्किनु:- कपाल नुहाउने वित्तिकै चिसो कपिाल लिएर बाहिर ननिस्किनुहोस् । चिसो कपालमा धुँलो कपालमा जम्छ र त्यसले चायाँ तथा इन्फेक्सनको समस्या समस्या देखिन थाल्छ ।
जसका कारण कपाल झर्न सुरु हुने गर्दछ ।५) हेयर स्टाइलिङ मेसिनको प्रयोग:- कपाल नुहाउने वित्तिकै ड्राइ वा स्ट्रेट मेसिनको आवश्यक भन्दा बढी प्रयोग गर्दा कपालको जरा कमजोर हुने गर्दछ जसकारण कपाल झ-र्ने र हाँ-गा आउने समस्या देखिन थाल्दछ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****नुहाउने वित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुहाेस् यी ५ गल्ती,नत्र जरा कमजोर लगायत देखिन सक्छ यस्तो समस्या !**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
जसका कारण कपाल झर्न सुरु हुने गर्दछ ।५) हेयर स्टाइलिङ मेसिनको प्रयोग:- कपाल नुहाउने वित्तिकै ड्राइ वा स्ट्रेट मेसिनको आवश्यक भन्दा बढी प्रयोग गर्दा कपालको जरा कमजोर हुने गर्दछ जसकारण कपाल झ-र्ने र हाँ-गा आउने समस्या देखिन थाल्दछ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
Nextटेलिकमले नमस्तेबाट नमस्ते कल फ्रि गर्ने सुविधा सुचारु?
यो हो गर्भवती महिलाको सुत्ने सही पोजिसन
विवाहपछि पनि बाहिरका युवतीमाथि आँखा लगाउन छोड्दैनन् यी राशिका पुरुष